पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई भन्छन् “नर्सहरू हाम्रा दोस्री आमा हुन् !’ - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
केही दिन वीर अस्पतालमा बसेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नर्सहरुलाई दोस्री आमाको संज्ञा दिएका छन् ।
न्युरो–इन्डोक्राइनको शल्यक्रियाका लागि उनी वैशाख १६ गते अस्पताल भर्ना भएका थिए । यसअघि ट्युमरमा क्यान्सर भएको आशंकामा भट्टराई परीक्षणका लागि भारतको नयाँदिल्ली पुगेका थिए । त्यहाँको परीक्षणले ट्युमरमा क्यान्सर नभएको देखाएपछि नेपालमै शल्यक्रिया गरेका हुन्।
अस्पतालमा नर्सहरुसँगको सामूहिक तस्विर राख्दै भट्टराईले फेसबुकमा निकै मर्सस्पशी शव्दहरु लेखेका छन् । उनी लेख्छन् ‘यस पटक वीर हस्पिटलमा (खास गरी अपरेसन पश्चातका पाँच दिन आइसीयूमा) बस्दा नर्सहरू हाम्रा जन्मजननी आमाकै नयाँ अवतार भएको अन्तरहृदयैदेखि अनुभूति भयो!’
. देउवाले पनि ‌ओलीप्रवृति कायम राख्नु चिन्ताको विषय हो : भट्टराई
. कुलमानलाई सम्झदैँ बाबुराम भट्टराईले भने,’कस्ता दिन आए !’
. बाबुरामलाई देखाउन पशुपतिमा चढाइयो १ सय लिटर दूध
नर्सहरुले गरेको सेवाको मूल्याङ्कन गर्दै उनले लेखेका छन् ‘कहिल्यै नचिनेका,कुनै नातासाइनो नभएका रोगी/अशक्त/अचेत मानिसहरूको दिसापिसाब सोहोर्ने, प्रदुषित शरीर सफा गर्ने,डाइपर समेत लगाइदिने,रातदिन झर्को नमानी विरामीहरूको स्याहार गर्ने काम अरू कसले गर्नसक्छ?’
तर यस पटक वीर हस्पिटलमा (खास गरी अपरेसन पश्चातका पाँच दिन आइसीयूमा) बस्दा नर्सहरू हाम्रा जन्मजननी आमाकै नयाँ अवतार भएको अन्तरहृदयैदेखि अनुभूति भयो!
अनि उल्टै उनीहरूलाई नै ‘छोरी बिग्रे नर्स ’ भनेर हेप्ने? १२/१३ बर्षसम्म करारमा काम लगाउने? न्यूनतम वेतन दिन समेत आनाकानी गर्ने? प्रोत्साहन भत्ता रोकेर राख्ने?
यस्ता साक्षात ‘देवी’हरू,हाम्रा दोश्री आमाहरूलाई हार्दिक नमन !!
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: सोमबार, भदौ २८ २०७८ १९:३७:००
कालिजलाई ताकेकाे बन्दुककाे छर्रा लाग्दा युवकको मृत्यु